C/raxmaan Faroole oo soo gaaray magaalada Muqdisho kana hadlay rajadiisa xilka madaxweynenimo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan Faroole oo soo gaaray magaalada Muqdisho kana hadlay rajadiisa xilka madaxweynenimo
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland kana mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
C/raxmaan Faroole oo si weyn looga soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa halkaasi kula hadlay warbaahinta Soomaalida.
Wuxuu C/raxmaan Faroole sheegay in hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya uu ku dadaali doonno sidii uu ku mideyn lahaa ummadda Soomaaliyeed, isagoona ballan qaaday inuu dalka ku dhaqi doono sharciga Islaamka.
Sidoo kale, C/raxmaan Faroole ayaa sheegay in dhibaatada haatan ka jirta Soomaaliya ay keentay inay Soomaalida ka baahnaadaan, taas oo uu ku tilmaamay mid nasiib darro ah.
Ugu dambeyntii, C/raxmaan Faroole ayaa sheegay inuusan wax lacag oo laaluush ah ku bixin doonin tartankiisa doorasho ee xilka madaxweynaha Soomaaliya, isagoona tilmaamay inuu aaminsan yahay in shaqsi lacag bixiyay uusan hormar gaarsiin karin Soomaaliya.